कोरिया पुगेकी नेपाली युवतीको वास्तविक कथा : २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस – Kavrepati
Home / समाचार / कोरिया पुगेकी नेपाली युवतीको वास्तविक कथा : २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
कोरिया पुगेकी नेपाली युवतीको वास्तविक कथा : २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
admin May 31, 2021	समाचार Leaveacomment 413 Views
मोवाइलमा कुरा गर्दै उनले भनिन, म तपाईको सेल्टरमा बस्न आउन लागेकी दिदी, कसरी आउने ? मैले सोधें, कहाँबाट आउन लागेको ? ‘जल्ला भुक्तोबाट ।’ हाम्रो सेल्टर कोरियाको पूर्वोत्तरतर्फको एक शहर सुवनमा छ । तर, उनी दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रको जल्ला भुक्तो भन्ने ठाउँबाट आउन लागेको सुनेर मेरो मुखबाट अचा`नक निस्कियो, ओहो ! त्यति टाढाबाट ?
Previous प्रचण्डले छोरीका लागि बनाए ५२ कराडौँको महल ?
Next कोरोना लागेको काकालाई भतिजले शनिबार दिउँसो राप्ती नदीमा फ्या के को भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (भिडियो सहित)-